I-Apple ikhipha isibuyekezo se-OS X El Capitan | Ngivela kwa-mac
Ukuvuselelwa Kwe-OS X El Capitan
I-Apple ikhiphe namuhla ukuvuselelwa okuncane okuhambisanayo kwe-beta yomphakathi ye-OS X El Capitan ngeMac App Store futhi lokho kuzoza ukulungisa inkinga okungenzeka kube yiyo ezinye izinhlelo zokusebenza ezingama-32 ziyeke ngokungalindelekile.
Uma ubukade uhlangabezana nezinkinga ngohlelo lokusebenza oluqubuka ngokungahleliwe ngenguqulo ye-beta ye-OS X El Capitan esivele ifakiwe, lesi sichibi ingaxazulula lolu hlobo lwenkinga, uhlala ucabanga ukuthi lezi zinkinga zihlobene nezinhlelo zomdabu ezingama-32 bit.
Kunoma ikuphi, kujwayelekile ukulindela ukuthi isimo esingaphambi kwesikhathi se-OS X El Capitan sisenalo lolu hlobo lwezimbungulu nezimbungulu ezingahleliwe ngoba kusekuningi okufanele kwenziwe izinhlobo ezizinzile ngokwengeziwe.
Ngakolunye uhlangothi, uma usuvele uyifakile i-patch, uzobe usubonile ukuthi kudinga kanjani ukuqala kabusha kwesistimu lapho kwenziwe khona, sizobona ukuthi kwakhiwa kanjani isibe ngu-15A216g efana ncamashi ne-beta yesithathu abathuthukisi asebevele bayijabulela.
Njengoba ngishilo, isibuyekezo I-Supplemental iyatholakala ukuze ibukwe kuqala lokho kwethulwe kusuka I-OS X El Capitan esidlangalaleni futhi ayisebenzi ku-beta yonjiniyela we-OS X 10,11, okusobala ukuthi ibingenayo le nkinga yesiphazamisi ngezinhlelo zokusebenza ezingama-32-bit.
Noma ngabe i-update inosayizi omncane, kusengumqondo omuhle ukwenza isipele iMac yakho ngaphambi kokufaka isibuyekezo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » Ukuvuselelwa Kwe-OS X El Capitan
Wakha kanjani amaqembu koxhumana nabo
Le yindlela onqamula ngayo iMac kunethiwekhi ye-WiFi